Huawei Y5 2019: Nkọwapụta, ọnụahịa na mmalite ụlọ ọrụ | Gam akporosis
Huawei Y5 2019: Smartphone ọhụụ ahụ
Fewbọchị ole na ole gara aga enwere mbụ ihihi banyere Huawei Y5 2019. Nke a ka anyị hụ na ekwentị ahụ rutere nso n'ikpeazụ. Ihe merelarị, n'ihi na akara ndị China emeela ka ama ọhụrụ a pụta ọhụrụ. Ekwentị ewebata na mpaghara Y, yabụ anyị amatalarị ihe ị ga-atụ anya na ya.
Anyị nọ n'ihu ekwentị dị mfe, nke na-abịa ezigbo uru maka ego. Otu ama nke akara ndị China na-achọ igosi nke ahụ ọ bụghị naanị na ha na-edu ndú na ngalaba kachasị elu Site na ahịa. Banyere imewe, Huawei Y5 2019 a maara nke ọma banyere ejiji nke ahịa.
Afọ a Huawei ahapụgoro anyị ekwentị dị iche iche n'ahịa a. Anyị enweela ike ịmata Y6 2019 ọzọ kwa Y7 2019. Ya mere, akara ndị China na-agbanwe usoro a dum, dịka ha na-eme kwa afọ. Ya mere, anyị na-ahụ usoro emelitere emelitere, na mgbakwunye na ụfọdụ ndozi na nkọwa ya.
1 Nkọwapụta Huawei Y5 2019
Nkọwapụta Huawei Y5 2019
Huawei Y5 2019 biara na ihuenyo ya na uchu ya dika odidi mmiri. Ọ bụ ezie na n'ọnọdụ a ọ na-enye mmetụta nke ịbụ ọkwa dịtụ oke karịa nke anyị na-ahụ na ekwentị ndị ọzọ taa. Maka nkọwa ya, akara ndị China na-ewepụta ihe dị mfe, mana ọ dị oke ọfụma na nke ahụ na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ nke ọma na oke ya. Ndị a bụ nkọwa ya zuru ezu:
Ihuenyo: 5,71 sentimita asatọ na mkpebi nke pikselụ 1.520 x 720
Nhazi: MediaTek Helio A22
Nchekwa ime: 16/32 GB (gbasaa na kaadi microSD)
Igwefoto n'ihu: 5 MP nwere oghere f / 2.2
Rear igwefoto: 13 MP nwere oghere f / 1.8
Batrị: 3.020 mAh
Usoro njikwa: Akara 9 Android na EMUI 9.0
Njikọ: Dual SIM, 4G, Bluetooth, Micro USB, NFC na ụfọdụ ụdị
ndị ọzọ: Ihu ihu, akpụkpọ anụ azụ
Akụkụ: 147,13 x 70,78 x 8,45 mm
Ibu ibu: 146 grams
Dị ka enwere ike ịtụ anya site na ekwentị n'ime mpaghara a, Huawei Y5 2019 na-ahapụ anyị nkọwapụta dị mma. Ọ bụ ezie na ọ na-agbaso ihe mmadụ na-atụ anya ya. Ihe bụ ihe ọzọ, gosipụtara ụdị afọ gara aga, ya mere o ji egosi na oke a n’iru. Ihuenyo ahụ na-anọ n'okpuru sentimita isii, ọ bụ ezie na ọhụụ a na-enweta ebe ọ bụla na-enweghị ike ịla. Nhazi ahụ sitere na MediaTek na nke a. N'ihi ya, ọnụahịa ya ga-adị ala.
Anyị na-ahụ nsụgharị abụọ nke ekwentị dabere na nchekwa ahụ. Ihe bụ ihe ọzọ, a ga-enwe nsụgharị ndị na-abata na NFC, nke bụ n'ezie ihe na-adọrọ mmasị ụfọdụ ndị ọrụ. Akụkụ ọzọ nke na - eweta mmasị bụ imecha na azụ, ebe ọ bụ na ụdị abụọ a na - eji ihe eji eme akpụkpọ anụ. Na nke a anyị nwere otu igwefoto n'akụkụ ọ bụla nke ekwentị. Ọ bụ ezie na ihu ihu na-ebute n'ihu igwefoto. Dịka anyị na-ahụ na ụdị ndị ọzọ dị ala, Huawei ewebatala ihe mmetụta mkpịsị aka na ekwentị a. Na mgbakwunye, ọ bịalarị otu gam akporo achịcha.
Huawei Y5 2019 enweghi onyinye ọdịnala, dịka na ekwentị sitere na ụdị ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na ọ pụtaworị na ntanetị nke mba China. N'ihi ya, ọ bụ ukara, ọ bụ ezie na ọ dịghị data na igba egbe nke a ekwentị. Ebe ọ bụ na ọ dịghị ihe ọmụma e nyere banyere mwepụta ego ọ ga-enwe. Ma ọ bụ ihe ọ bụla banyere ụbọchị ma ọ bụ ahịa na nke a ama na-aga na-oru.
O yiri ka a ga-enwe ọtụtụ nsụgharị, ha niile nwere 2/16 GB ma ọ bụ 2/32 GB. Agbanyeghị n'ụdị ụfọdụ anyị nwere nkwado NFC yana ndị ọzọ anyị anaghị. Anyị enweela ike ịhụ na Huawei Y5 2019 a ga-enwe nsụgharị abụọ nke ahụ bia na faux akpụkpọ anụ azụ, dị ka ị pụrụ ịhụ na foto ahụ. Ndị a bụ agba ojii na agba aja aja. Ọ bụ ezie na e nwere nsụgharị abụọ ọzọ nwere azụ plastik, nke dị oji na otu na-acha anụnụ anụnụ. Anyị na-atụ anya ịnụkwu banyere mmalite ya n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei Y5 2019: Smartphone ọhụụ ahụ
The OPPO Reno na eze rutere na Europe